Jananinepal.comरोचक Archives - Page3of 100 - Jananinepal.com
तपाईंको यौन सम्पर्क कति लामो अबधिसम्म रहन्छ?
एजेन्सी: यौन क्रियाकलापको बारेमा धेरैका धेरैथरी मत छ । तर खासमा यो व्यक्तिको निजी मामिला पनि हो । यहि विषयलाई लिएर व्यक्तिले धेरै टाउको दुखाईरहेको पाइन्छ । कि खासमा शारीरिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै गर्दा कति समयमा स्खलन हुनु सामान्य हो भनेर । नेपालमा यसको अनुसन्धान भइसकेको छैन तर पश्चिमा देशमा भने यौन क्रियाकलाप गरिरहेका पार्टनरबीचको […]
के कारण देखिन्छ यौनका सपना?
एजेन्सी: निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावनात्मक इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि जो कोहि व्यक्तिले किन अनेक किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन । सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि सेक्स हर्मोनले एकातिर यौनव्यग्रता तथा यौनतनाव बढाउँछ भने […]
गर्भवती श्रीमतीलाई यसरी दिनुहोस सेक्सको आनन्द
एजेन्सी : गर्भवती महिलाहरु पेटमा बच्चा बसेको समयमा निकै सावधानी अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चोट लाग्दा पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु विषेश सावधानी अपनाउन चाहन्छन् । त्यहि कारण हुनसक्छ अधिकांश महिला एवं पुरुषहरु गर्भवती रहेको समयमा यौन सम्पर्क राख्न चाहदैनन् । कतिले यो पनि भन्छन् महिला गर्भवती भएको तीन महिनापछि […]
महिलाले पुरुष सङ्ग बिस्तारामा के चाहन्छिन?
एजेन्सी – सेक्स वास्तवमा एक सुन्दर अनुभूति हो । चाहे यो पहिलो पटक होस् या नियमित यसले कुनै फरक पर्दैन । महिलाले हाम्रो सामाजिक चेतनाका कारण आफ्नो सेक्स इच्छा खुलेर भन्न सक्दैनन् । के तपाईंलाई थाहा छ एक महिला सेक्सको दौरानमा के चाहन्छिन् ? यहाँ तपाईंलाई हामी एक महिला सेक्सको दौरानमा के चाहन्छिन् तर भन्न […]
कम उमेरमै किन फुल्छ कपाल? के हो त समाधानको उपाय ?
एजेन्सी : कपाल कालो बनाउने एक तत्व हुन्छ, जसलाई मेलानिल पिगमेन्ट (प्राकृतिक रंग द्रव्य) भनिन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा यसको कमी हुँदै जान्छ। अनि फुल्छ कपाल। यद्यपी आजभोली उमेरमै (किशोरावस्थादेखि नै) कपाल फुल्ने समस्या देखिन थालेको छ। किन फुल्छ कपाल ? सामान्यतया ३० वर्षपछि कपाल सेतो देखिन थाल्यो भने यो समान्य मान्नुपर्छ तर ३० वर्ष पहिले […]
एजेन्सी : सेक्स सन्तान उत्पादनको प्राकृतिक नियम भएपनि यसलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । महिला र पुरुषबीचमा स्वभाविक रुपमा हुने आकर्षण अन्ततः सेक्समा परिणत हुन्छ । यसले शारीरिक र मानसिक वा भौतिक र आध्यात्मिक सुख दिन्छ । सेक्सले सन्तुष्टि पनि दिन्छ जसले मान्छेको दैनिक क्रियाकलापदेखि दीर्घायुसम्मलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ […]
जननीनेपाल सम्बादाता: मानिसको शरीरमा हुने सानो कालो थोप्लोलाइ कोठी भन्ने गरिन्छ। कोठीको बारेमा विभिन्न बिश्वास र मान्यता रहेकोछ। शरिरको जुन स्थानमा कोठिहरु रहेका हुन्छन त्यसको छुट्टै महत्त्व र मान्यता भएको बिश्वास मान्ने गरिन्छ । शरीरको कुन स्थानमा कोठी हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ त? -निधारमा कोठी हुनेहरू निकै बलवान् मानिन्छन। -दाहिने गालामा कोठी हुनेहरु एकदम भाग्यमानी […]